Garoowe:Mudaharaad looga soo horjeedo Siyaasada DF iyo Dhibaatooyinka Somalida ee Koonfur Afrika oo ka dhacay Garowe. | Salaan Media
Home Wararka Garoowe:Mudaharaad looga soo horjeedo Siyaasada DF iyo Dhibaatooyinka Somalida ee Koonfur Afrika...
Garoowe: (SM)- Mudaharaad balaaran oo lagaga soo horjeedo dagaaladii ka dhacay Kismaayo iyo dhibatoyinka konfur africa ku hayso somalida ayaa maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Mudharaadkan oo ka dhacay fagaaraha Garoowe ay caanka ku tahay ee Barxadda ayaa waxaa soo abaabulay shacabka Garoowe oo aad uga caroooday dagaaladii toddobaadkan Kismaayo ka dhacay iyo dhibtoyinki konfur Africa.
Dadweynaha mudaharaadayey ayaa sitay calamada Jubaland iyo Puntland,waxaana ay ku dhawaaqayeen hadalo ay ku taagarsan yihiin Jubaland iyo kuwo ay uga soo horjedaan DF oo ay shegeen inay abaabushay dagaalada iyo xiisadaha Kismaayo.
Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Puntland,maamulada gobollada Nugaal iyo Mudug,iyo qaybha bulshada ayaa mudaharaadkan ka qayb-galay hadalana kasoo jeediyey.
Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Jaamac (Quraan jecel)oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay banaanbaxa ayaa sheegay in DF ay bedeshay Dastuurkii lagu hishiiyey,wuxuuna dagaalada Kismaayo si cad ugu eedeyey inay abuubashay DF ee Somaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey)oo isna hadlay dhibaatooyinka koonfur Africa ee Somalida lagu hayo ayaa sheegey in ay yihiin kuwo aan loo dulqaadan Karin.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cai oo iska ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadashey banaanbaxa ayaa muujiyey taageerada reer Puntland u hayaan Jubaland,wuxuna cod dheer ku sheegay in dhisitaanka maamulka Jubaland halgan badan laga soo maray aysana aqbaleyn in la burburiyo.